My freedom: Candy is Back and Thanks!!!
စာမေးပွဲကောင်းကောင်းဖြေနိုင်ပါစေ ချိုချဉ်လေးရေ...။ ခုတော့ ခနလေး ဦးနှောက်လာဆေးတာပေါ့...။
ဖွားလေးနခေါင်းကလည်း ကာတွန်းနခေါင်းလေး ခိခိ....
ရေခဲချောင်းမစားဖြစ်တာတောင်ကြာပြီ။ စာမေးပွဲဖြေနိုင်ပါစေ။ မြတ်ကြည်က ဧပြီ ၄ရက်။ အခုထိ ဟုတ်တိပတ်တိမလုပ်ဖြစ်သေး။ :D
ရောက်၏ .. ကန်န်ဒီဒါမျိုးပေါသောသောလေး မြင်ရတာ စိတ်ချမ်းသာတယ်..ဒီထက်ပေါရင်တော့ ဘယ်လိုနေမယ်မသိ...ချစ်တဲ့အိမ်မက်
ဟုတ်ပ... စာမွဲတွင်းဆိုတော့ မျောက်မှန်ကြီး မချွတ်နိုင်ဘူးဖစ်နေတယ်.။ ပါဝါများမယ်ထင်တယ်နော်.. ။ တားလည်းတပ်ရတယ်.။ ဘယ်၁၅၀ ညာ ၁၇၅..။နည်းပညာကျေးဇူးကြောင့်.ပုလင်းဖင်တော့မတပ်လိုက်ရဘူး.။ ဟီး ဟီး..။
အလင်းရောင်နဲ့ ခဏဝေးတဲ့အခါတိုင်းစိတ်ဓါတ်တွေလည်း မကျပါနဲ့တခြားဘ၀တွေလည်း ဒီလိုပဲတစ်နေ့နေ့တော့ ကြိုးစားမှုရဲ့ ရလဒ်တွေ…ပိုင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာမှာပါ….။မထင်မှတ်ထားတာတွေ ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါဘယ်ဆီမှလည်း လျှောက်မပြေးပါနဲ့မားမားမတ်မတ် အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်လိုက်ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ် This too will Pass ပေါ့….။းးးးးးးDစာမေးပွဲဖြေနိုင်ပါစေနော်မမကန်ဒီ
စာလုပ်တော့ငါ့ညီမရေ....စိတ်ညစ်တာတွေ အခန်းဝမှာချိတ်......ဖြေနိုင်တယ်ဆိုတာဘဲ ကြားချင်တယ်နော်........
စာမေးပွဲတွေအားလုံး Grade ကောင်းကောင်းရပါစေ ချစ်ညီမလေး.. :) :D
ဟင်းးဟင်းးစာမေးပွဲအကြောင်းပြပြီးအစားချည်းလှိမ့်တီးမနေနဲ့နော်သကြားလုံး ဆေးသောက်လို့သကြားလုံးတို့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ပြီခုတော့ သာမီးစားချင်တာစားလို့ရပြီ ချောင်းဆိုးတော့ဝူးး ရင်ကြပ်တော့ဝူးးး ဆေးလဲထိုးရတော့ဘူး ဆေးလဲသောက်ရတော့ဘူးး)))
စာမေးပွဲနားနီးပြီဆိုတော့ စာလဲကြည့် ကျန်းမာရေးကိုလဲ ဂရုစိုက်ဦး ညီမ...
ဪဟော်... ကဒ်သစ်ရလို့ ဘဏ်သွားရအုံးမယ်လို့ပြောတာကိုး။ ညေး သဲစေတီကို မလိုက်ချင်လို့ မဟုတ်လား။ တိန်! :P ခရမ်းရောင် ခေါက်ဆွဲကိုမြင်ဖူးချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် 8Yar ကခေါက်ဆွဲမကြိုက်ဘူးဗျ။ "အဲ့ဒါ ဘယ်နေရာလို့ ထင်လဲ?? (သဲလွန်စ မရှိသောပုံကို တမင်ပေးသည် :P)" အဲ့ဒါ ကားစီးတုန်းရိုက်ထားတာဖြစ်ရမယ်။ ဟိ ဟိ.. စိတ်ဆိုးနဲ့နော်။ သူငယ်ချင်း Candy ပြန်လာလို့ ပျော်လို့ လျှောက်ရေးတာ။ စာမေးပွဲအပြီး တွေမျော်နေမယ်နော်။ :) Candy က ဉာဏ်ကောင်းတာပဲ ဖြေနိုင်မှာပါ... တရားနဲ့.. တိန်! :P နှာ့နယ်နော် အကောင်းပြောနေရင် စိတ်ကဖောက်ဖောက်လာတယ်။ ဒါဗြဲ Candy ရေ... :)
သဲလွန်စ ရသွားပြီ CANDY နီ နောက်မှာလည်းတိုင်နဲ့ လက်မှာလည်းကြိုးနဲ့ဆိုတော့ နီ ရွာသာကြီးရောက်တုန်းက ရိုက်ထားတာပါ..CANDY ဟိုတလေားကပျောက်သွားတာ ရွာသာကြီးကိုရောက်သွားတာ ဒါကြောင့် "ရွာသာကြီးရောက် အမှတ်တရ ပုံ"...(မှတ်ချက်။ ။စတာနော် စိတ်ချိုးနဲ့...)ပျော်ရွှင်ပါစေ သံခြင်း
ဒီဘိတ်ကဒ်ဆိုလားဘာလား အဲ့ဟာလား....နာတို့ဆီပို့တာကြာပေါ့..တူမတူတော့မတိ...၊သွသူ အဆင်ပြေသွားတာပါပဲ...နာတို့တော့...။အင်း..ပြန်လာပြီပေါ့....မုန့်ဝယ်ကျွေးဖို့ ပြင်ထား...စာမေးပွဲပြီးရင်...:)))။ဒါ့ပုံထဲကနောက်ခံရှုခင်းကိုသေချာကြည့်တယ်...။ဒါစင်္ကပူမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံမှတ်လား...:P။ကဲ..မှန်တယ်ဟုတ်....:)))))။ချိုင်းနိ့ဂါးဒင်းဖြစ်မယ်ထင်ရဲ့...။
အစားအသောက်တွေ မသောင်းကျန်းနဲ့နော်။ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပြီးစာကျက်ပါ သကြားလုံးလေး။စိတ်ဓာတ်အစဉ်ကြည်လင်အေးမြပါစေကွယ်။မေတ္တာဖြင့်အန်တီတင့်
stress တွေ အရမ်းများနေတယ်နဲ့ တူနယ်ဒါပေမယ့် မျက်နှာကတော့ ever smile နေတာပဲဟုတ်တယ် အစ်မရေအရင်လို ပေါပေါလေးပဲနေပါနည်းနည်းလေးတော့ ပေါနေတယ်ပေါပေါလေးပဲကောင်းပါတယ်
ဒို့တွေမတွေ့ဖြစ်တာတောင်အတော်ကြာပါပေါ့စာတွေကြားလုံးပန်းနေရတာနဲ့တင် ဟီးးးးးးတခါတလေတော့ ခေါင်းထောင်ပြီး ထိုးထွက်အလည်လာခဲ့ရ၏။ နေကောင်းတယ်ဟုတ်?
စာမေးပွဲကောင်းကောင်း ဖြေနိုင်အောင် ဖြေနော်။ စာတွေနဲ့ချည်းတော့ ပိမနေနဲ့ပေါ့း)။ လန်းလန်းဆန်းဆန်း ဖြစ်အောင်လည်း နေပေးပေ့ါ။ ချစ်တဲ့မမသဒ္ဓါ
ရေးထားတာတွေလည်းဖတ်တယ်။ကွန်မန့်် တွေလည်းဖတ်တယ်။ပုံတွေထဲမှာ အောက်ဆုံးကြမှ မမတီရဲ့ပုံအစစ်ကိုတွေ့ တော့တယ်:P ခင်မင်လေးစားလျက်-လေလွင့်
ကန်ဒီရေ အပေါ်ဆုံးပုံက ငါ.ကိုအလေးပြုတာလား ဟီးးအဲ.လောက်ထိလေးစားဖို.မလိုပါဘူး အချင်းချင်းတွေဘဲ ငါ ပြန်အလေးပြုလိုက်တယ်နော် ဟီးး
ကန်ဒီရေ စာမေးပွဲကို အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ဖြေဆိုနိုင်ပါစေ..Aja Aja Fighting !
ကန်ဒီရေ..စာမေးပွဲအတွက် ရတြယာချေရမယ်...အချင်းချင်းတွေမို့ ရတြယာ လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ် သေချာလုပ်လိုက်ပါ ။စာမေးပွဲဆိုတော့ အင်္ဂါနံဆိုတော့ကား ဒီလိုလုပ်. စာမေးပွဲဖြေမဲ့ စာအုပ်ကို ရှေ့မှာချပါ၊ စောင်ခြုံပြီး၊ စန္နရားလှထွတ်သီချင်းကိုနားထောင်ပြီး၊ဆီးယိုစားပြီးလျှင်၊ စောစောစီးစီး အိပ်ပါလေ..ထိုရတြယာကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်ပေးပါက မြေကြီးလက်ခက်မလွဲ စာမေးပွဲကြီးအောင်ပါလတ္တံ့
စာမေးပွဲပြီးရင် ဘလော့အသစ်က ဓာတ်ပုံလေးတွေလာကြည့်အုံးနော်
ငပေါလေး.......ညဉ်းဆီကိုလာရတာ မကောင်းဘူးသိလား အကို့ကို သရဲခြောက်ခြောက်လွှတ်တယ်))၀။
Android ဖုန်းအတွက် ဓာတ်ပုံတွေကို ရေအရိပ်ထည့်ပေးတဲ့ Water Reflection
မသေသော်လည်း တကယ်သေသွားရသော အမျိုးသမီး
Facebook ကတစ်ဆင့် ဆရာများကိုတိုက်ခိုက်
ဆင်ခြင်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကို ခတ်ထားသောဘောင်များ နှင့် ၄င်းတို့၏လွမ်းမိုးမူများ